नवलपरासी कावासोती १६ की सुविना गिरी मृत्य प्रकरण : झुन्डिएको नभई घाँटी थिचेर हत्या ! – Daunne News
नवलपरासी कावासोती १६ की सुविना गिरी मृत्य प्रकरण : झुन्डिएको नभई घाँटी थिचेर हत्या !
गत जेठ ३० गते तिलोत्तमा नगरपालिका–६ मा मृतावस्थामा फेला परेकी २५ वर्षीय सुविना गिरीको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ ।
शव परीक्षण रिपोर्टमा झुन्डिएको नभई घाँटी थिचिएका कारण मृत्यु भएको खुलेपछि सुविनाका अभिभावकले किटानी जाहेरी दिएका थिए । सोही जाहेरीका आधारमा सञ्जय र कुशललाई पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले बताए ।
“शव परीक्षण रिपोर्टमा झुन्डिएर नभई ‘नेक प्रेसर’का कारण मृत्यु भएको भन्ने आयो त्यसैले घटना शंकास्पद छ, अब आरोपितबाट पनि धेरै कुरा खुल्छ,” प्रमुख केसीले भने ।
सुविनाका श्रीमान् सञ्जयले सुविनालाई तिलोत्तमा–६ पश्चिम पहुनीमा रहेको मिलन फेमिली रेस्टुरेन्टको कोठामा जेठ ३१ गते राति १ बजे झुन्डिएको अवस्थामा फेला पारी सुविनालाई क्रिमसन अस्पताल पुर्‍याएपछि आफन्तलाई खबर गरेका थिए । सुविनालाई अस्पताल पुर्‍याउँदा चिकित्सकले पहिले नै मृत्यु भएको बताएका थिए ।
यता सुविनाको घाँटी थिचेर मृत्यु भएको पुष्टि भएकाले दोषीलाई कारबाही गर्न सुविनाका आफन्तले माग गरेका छन् । सुविनाका बाबु नरु गिरीले शव परीक्षण रिपोर्टअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्दै न्याय दिन आग्रह गरे । “शव परीक्षण रिपोर्टले घाँटी थिचेर हत्या भएपछि झुन्ड्याइएको प्रस्ट पारेको छ, दोषीलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ,” उनले भने ।
यसअघि सुविनाका बाबु नरुले गत जेठ ३१ गते नै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा छानबिन गरी कारबाही गरियोस् भनी जाहेरी दिएका थिए भने बुधबार किटानीसहितको जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मध्यरातमा आफ्नै आगाडि झुन्डिएको र आफैँले अस्पताल ल्याएको दाबी गरेका सुविनाका पति सञ्जयको बयानसमेत नमिलेको देखिएकाले घटना रहस्यमय भएको प्रहरीको भनाइ छ । गत जेठ ३० गते राति घरदेखि केही परको होटलमा झगडा भएपछि सोही होटलको कोठामा सुविना एक्कासी झुन्डिएको सञ्जयको बयान थियो । झुन्डिएको हो वा होइन भन्नेमै आशङ्का रहेका बेलामा आएको शव परीक्षण रिपोर्टले भने झुन्डिएर मृत्यु नभएको यकिन गरिदिएको छ । “घाँटीमा हातले थिचेको छ, टाउकामा पनि चोट देखिएको त्यसैले स्पष्ट भन्ने आधार छैन,” डा. आहना श्रेष्ठले भने ।
झुन्डिएको अवस्थामा देख्ने कोही नभएको र पतिकै व्यवहार शंकास्पद लागेपछि माइतीले सुरुदेखि नै गहिरो अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए । झुन्डिएको भनिएको दिन बिहानैदेखि दिउँसोसम्म घरमा झगडा भएको, नन्द, आमाजुलगायतले पनि गालीगलौज गरेको, अघिल्लो रात पतिले मदिरा सेवन गरी कुटपिट गरेको, आफ्नै सामुन्ने कुटपिट गर्दा पनि सासुले रोक्ने पहल नगरेको र मानसिक तथा शारीरिक यातना दिनदिनै दिने गरेको खुलेको माइती पक्षको दाबी छ ।
सुविनाकी फूपू छमा गिरीले सुरुमै सूचना दिने बेलादेखि नै पति (सञ्जय) र परिवार तथा नातेदारको भूमिका शंकास्पद लागेको बतायन् । झुन्डिएर मरेको भन्ने कुरा शव परीक्षणमा पुष्टि नभएपछि पतिले नै परिवार तथा नातेदारको सहयोगमा कर्तव्य गरेर मारेको आशङ्का रहेकाले प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न आग्रह गरिएको सुविनाका काका निमु गिरी बताउँछन् ।
शरीरमा लागेको चोटपटक, भुत्ल्याइएको कपाल, नङका डाम, विभिन्न ठाउँमा निल डाम प्रस्टै दिखिएकाले पनि सुरुमै आत्महत्या होइन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ । सुविनाको मृत्युपछि दुई नाबालक सन्तानको संरक्षण, हेरचाह र भविष्य सुनिश्चितताका लागि चल–अचल सम्पत्ति व्यवस्था गर्नसमेत माइती पक्षको माग छ । -बाह्रखरीबाट
रूपन्देहीको तिलोत्तमामा एक युवतीको ‘शंकास्पद’ मृत्यु
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक युवतीको शंकास्पद मृत्यु भएको छ । तिलोत्तमा नगरपालिका–६ सेमरीचोककी २५ वर्षीया सुविना गिरीको शव झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको परिवारको दाबी छ । तर, परिवारको दाबीलाई सुविनाको माइती पक्षले अस्वीकार गरेको छ ।
मृतक सुविनाका पति सन्जु गिरीले आफूहरूले सञ्चालन गरिरहेको होटलमा राति करिब १ बजे उनी झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको र देखेपछि अस्पताल लगेको बताएका छन् । तर, माइती पक्षले भने झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको भने पनि छिमेकी कसैलाई खबर नगरी अस्पताल पुर्‍याइएकाले शंका उब्जिएको बताएका छन् ।
केटा पक्षकाअनुसार सुविनालाई राति २ बजे क्रिमसन अस्पताल मणिग्राममा ल्याउँदा चिकित्सकहरूले मृत घोषणा गरेका थिए ।
सुविनाको माइती पक्षले भने आफैँले कुटपिट गरेर झुन्डाएको आरोप लगाएका छन् । सुविनाकी फुपू क्षमा गिरीले शरीरभरि नीलडाम भएकाले पतिले हत्या गरेको वा झुण्डाएको आरोप लगाएकी छन् । माइतीपक्षले घटनाको सत्यतथ्य माग गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले घटनाको अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । मृत्युको कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी निरीक्षक सन्तोष घिमिरेले बताए । मृतकका दुईजना नाबालक छोराछोरी छन् ।
क्रिमसन अस्पतालमा राखेको शव अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा ल्याइएको छ ।